Saciid Deni oo loo dhaariyay madaxweynaha cusub ee Puntland – Kalfadhi
Saciid Deni oo loo dhaariyay madaxweynaha cusub ee Puntland
Saciid Cabdulaahi Deni ayaa loo dhaariyay xilka madaxweynaha cusub ee Puntland ee shanta sanno. Saciid Deni oo la tartamayay 20 musharax oo kale ayaa wareegii ugu dambeeyay ku guuleystay afar cod. Wuxuu helay 35 cod, halka musharax Janaraal Asad Cusmaan oo wareega ugu dambeeyay kula tartamay uu helay 31 cod.
Hadal kooban oo uu jeediyay madaxweyne Deni kahor inta aan la dhaarin, waxa uu ugu mahadceliyay xildhibaanada baarlamaanka dowlad-goboleedka Puntland, guddiga doorashada iyo isimada deegaanka.
Janaal Asad ayaa aqbalay natiijada doorashada isaga oo hambalyeeyay islamarkaasna balanqaaday in uu la shaqeyn doono madaxweynaha cusub. Madaxweynaha xilka wareejinaya Dr Cabdiweli Mohamed Gaas oo ku haray wareegga koowaad ee doorashadu ayaa isagu u hambalyeeyay madaxweynaha cusub oo ku tilmaamay xilkas sama-bixin kara Puntland.
Madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Deni waxa uu horey usoo noqday xildhibaan ka mid ah Golaha Shacabka ee baarlamaanka federaalka ah. Waxa uu sidoo kale soo noqday wasiir iyo Raysal wasaare kuxigeenka dowladda federaalka ah.
Waqti yar kadib ayaa waxaa bilaaban doono doorashada madaxweyne kuxigeenka Puntland ee shanta sanno ee soo socota. Waxaa ku tartamaya 11 musharax oo laga yaabo in labo ka mid ah ay iscasilaan kahor inta aysan codeyntu bilaaban, iyada oo la eegayo xeerka wax-qeybsiga beelaha.
Hadal Jeedinta Musharraxiinta Madaxweyne Kuxigeenka Puntland oo galabta soo dhamaatay
Madaxweynaha cusub: Lacag lagama bixin karo khasnadaha dowladda